DHEGEYSO Gudoomiyaha Baay oo Shacabka Koonfur-galbeed ee Puntland ku nool ugu baaqay in ay sugida ammaanka door ka qaataan. – Radio Daljir
DHEGEYSO Gudoomiyaha Baay oo Shacabka Koonfur-galbeed ee Puntland ku nool ugu baaqay in ay sugida ammaanka door ka qaataan.
Agoosto 21, 2016 10:55 g 0
Guddoomiyaha gobolka Baay ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Rashiid cabdillaahi Maxamed ayaa ayaa dadka ka soo jeeda gobollada maamulka koonfur Galbeed ee ku dhaqan Puntland u soo jeediyey in ay ka qaybqaataan ammaanka deegaannada ay ku noolyihiin ee Puntland, gacanna siiyaan ciidama ammaanka eek u hawlan sugidda nabadgalyada.
Hadalka guddoomiyaha ayaa yimid iyadoo shalay magaalada Galkacyo ay ka dhaceen labo qarax oo khasaare gaystay, taasoo keentay gobollada kala duwan ee Puntland in laga bilaabo hawlgallo amni iyo baaritaanno dheeraad ah oo ammaanka la xiriira.
Guddoomiye Rashiid oo la soo xiriiray Radio Daljir, ayaa waxaa wareystay Kooshin oo marka hore waydiiyey sababtiisa la soo xiiriiritaan iyo waxay ku saabsan tahay
Xasan Sheekh Maxamuud oo ku baaq in dagaal Alshabab loo midoobo.